संसद् पुनर्स्थापना भएपछि सडकमा खुशीयाली, प्रचण्डले भने- ओलीसँग तत्काल सहकार्य हुँदैन — onlinedabali.com
डबली संवाददाता२०७७ फागुन ११ गते
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतको संसद् पुनर्स्थापना गर्ने फैसलाले जनताको जित भएको बताए । उनले संसद् पुनर्स्थापनाको लागि आन्दोलनमा उत्रिएका सबैलाई बधाई समेत दिए ।
संसद् विघटनविरुद्ध बुधबार आयोजना गर्न लागिएको जनसभालाई सम्बोधन गर्न चितवन पुगेका प्रचण्डले अदालतप्रति जनताकोक विश्वास बढेको समेत बताए । भरतपुरस्थित चितवन गार्डेन रिसोर्टमा बास बस्न पुगेका प्रचण्ड र अर्का नेता माधव कुमार नेपालले संयुक्त रुपमा खुशीयाली बनाए ।
विरोधमा हुन थालेको भोलिको जनसभा विजय जुलुसमा परिणत हुने भएको छ । पुनर्स्थापनाको खबर सुनेपछि प्रचण्ड र माधव नेपाल खुसी देखिएका छन्, सहभागीहरुसँग खुसी साट्दै प्रचण्डले सबैलाई बधाइ दिएका छन् ।
प्रचण्डले संसद् पुनर्स्थापनापछि पनि आफूहरु सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने प्रतिक्रिया दिए । तर, प्रतिगमनकारी भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भने सहकार्य नहुने बताए । प्रचण्डले ओलीको नाम नलिएरै प्रतिगमनकारीको असंवैधानिक कदम असफल भएको भन्दै तत्काल राजिनामा दिनु पर्ने बताए ।
त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा भएको बताएका छन् ।
अध्यक्ष यादवले भने, ‘सर्वोच्चको फैसला संविधानवाद र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा छ ।’ अदालतको फैसलाले मुलुक ठूलो राजनीतिक दुर्घटनामा जानबाट जोगिएको यादवले बताए ।
दिल्लीमा अस्पतालमा रहेका जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले लोकतन्त्रको रक्षा गरेको बताएका छन् । उनले अदालतको फैसला सुन्दा रोगै हराएजस्तो भएको बताए ।
भट्टराईले सामाजिक संजालमा लेखेका छन्- ‘कस्तो सुखद् संयोग ! अस्पतालमा आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षणको प्रतिवेदन पर्खदै गर्दा मन चाहिँ देशभित्र सर्वोच्चको फैसलातिर थियो’ पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले ट्विटरमा लेखेको छन्, ‘हिन्दु मिथको भष्मासुरलाई विष्णुले मोहिनी रुप धारण गरेर वध गरे झै सर्वोच्च अदालतले नेपाली भष्मासुरको वध गरेर लोकतन्त्रको रक्षा गरेको खबुर सुन्दा रोगै हराए झै भयो ।’
संसद् पुनर्स्थापना भएसँगै सडकमा खुशीयाली बनाइएको छ । युवा विद्यार्थीहरु दीप प्रज्ज्वलन गरिरहेका छन् ।